Akwụkwọ ndị akwadoro maka ọdịda: aha kachasị ewu ewu | Akwụkwọ ugbu a
Akwụkwọ akwadoro maka ọdịda
Juan Ortiz | 04/10/2021 18:02 | Emelitere ka 14/10/2021 15:15 | Ndị edemede, Akwụkwọ, Akụkọ
Mgbụsị akwụkwọ na akwụkwọ ya nwụrụ anwụ
Oge akwụkwọ nke gbasasịrị n'akụkụ ụzọ eruola na web jupụtara n'ọchụchọ metụtara "akwụkwọ akwadoro maka ọdịda". Na -eche echiche banyere ndị na -agụ akwụkwọ nwere ike imikpu onwe ha na akụkọ ọma, emela nhọrọ nke ọma akwụkwọ nke na -ekwesịghị ịdị na nchịkọta ọ bụla, nke ga -esokwa ọnwa ndị na -ebute oge oyi.
N'ebe a, ị ga -ahụ site n'ọrụ ndị kpalitere ọgba aghara na 2021, ụfọdụ ndị edobere ka oge na -aga n'ihi atụmatụ na nhazi ha. Utu aha Oku oku (2020), nke Arturo Pérez Reverte; Ọkara eze (Oké Osimiri Oké Osimiri M, 2020) nke Joe Abercrombie dere o Uhie Nwanyị (2018), nke Juan Gómez-Jurado, ịkpọ aha ole na ole.
1 N'etiti abalị (2021)
2 Ọkara Eze (2014)
3 Nke 100 (2021)
5 Usoro Ọkụ (2020)
6 Mgbapụta (2020)
N’etiti abalị (2021)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ikpeazụ nke Spanish Mikel Santiago; bipụtara na June 2021. Ọzọ onye edemede ahụ na -ewepụta akụkọ omimi nke edobere na akụkọ ifo nke Illumbe, nke dị na Basque Country. Nkata ahụ na -apụta n'agbata oge gbara ọchịchịrị na ugbu a nke na -agaghị agbanahụ nsonaazụ nke ụbọchị ọjọọ ahụ.
Na Satọdee Ọktoba 16, 1999 bụ mmemme ikpeazụ nke otu egwu egwu Los Deabruak - otu Diego Letamendia na ndị enyi ya. N'abalị ahụ bụ ihe omume gbanwere ọdịnihu onye ọ bụla: Lorea - Enyi enyi Digo- Ọ na-efu. N'agbanyeghị usoro nyocha ndị uwe ojii siri nke ọma, ahụghị ebe nwa agbọghọ a nọ.
Afọ iri abụọ ka e mesịrị, Diego Leon —Onye gbasoro ọrụ solo ya - laghachi Illumbe. Ihe kpatara nlọghachi bụ ka m gwa Bert okwu, enyi ochie (onye bụbu onye otu egwu) onye nwuru na oke oku.
Mgbe olili ozu gasịrị, n'etiti mkparịta ụka nke ndị maara, inyo enyo na -ebilite na ikekwe ihe mere bụ kpachaara anya mee. Nke a, n'aka nke ya, na -akpọlite ​​ọtụtụ ndị amaghị, na otu ihe kacha ajụ oyi bụ ma ọnwụ Bert ejikọtara na mwepu Lorea ...
N'etiti abalị (The Plot)
Ọ bụ egwuregwu efu nke Joe Abercrombie dere - Kedu nke malitere trilogy Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ—. E bipụtara nsụgharị mbụ ya na 2014, ebe ewepụtara nsụgharị Spanish ya ka otu afọ gachara. Akụkọ ihe mere eme na -ewere ọnọdụ na Thorlby ma na -agbagharị n'ọchịchị Gettland.
N'alaeze nke ndị dike, Yarvi - Nwa nke abụọ nke Eze Uthrik- atawo ahụhụ site n'ịjụ ya ndu ya nile site nwere nkwarụ dị n'aka gị. Nkwarụ anụ ahụ ya na -akpali ya ịmụ ihe dịka ụkọchukwu, ka o wee bụrụ akụkụ nke usoro ndị ụkọchukwu. Ma foto ahụ gbanwere mgbe e gburu nna ya na nwanne ya. N'ihi ihe ọjọọ ahụ, Yarvi ga -eweghara ocheeze.
El eze na -eto eto na onye na -enweghị uche ga -enwerịrị nnukwu ibu ọrụ na gburugburu ajọ omume na enweghị isi, nke obi ọjọọ na nrara na -achịkwa - nke na -eme ka o sie ike inwe ndị enyi. N'ọnọdụ a siri ike (nkwarụ ya na -aka akara na njedebe), Yarvi ga -ejikọrịrị ihe ọmụma ya iji nwee ihe ịga nke ọma n'ọgụ ọ bụla.
Ọkara eze (Oke osimiri ...
Nke asaa (2021)
Onye edemede New York Kass Morgan na-ewetara anyị akụkọ na-atọ ụtọ mgbe ọ gbasara apocalyptic nke ọ na-eji aghụghọ egosipụta ọdịdị mmadụ. Na dystopia a - ihe enyemaka n'ime akụkọ ya -, A na -ahọrọ otu narị ndị a chụpụrụ achụpụ iji nyochaa ma ụwa a kwesịrị ka ebi ya ọzọ
Ụwa tara ahụhụ agha nuklia na -emebi ihe nke bibiri ọtụtụ ndị mmadụ. Ruo ọtụtụ afọ, ndị lanarịrịnụ na -ebi n'ụgbọ mmiri na -efefe n'elu mbara igwe n'elu oyi akwa na -egbu egbu nke gbara uwa dum gburugburu. N'ihi mmụba nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri, ọnọdụ ahụ ruru oke: ihe oriri agwụla, yabụ, mmekọrịta adịghị mma.
Ndị ọchịchị na -ekpebi iziga otu ndị nyocha ka ha nyochaa ọnọdụ ụwa ma ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume ibi ya ọzọ. Dị ka mkpochapu na iji zere mfu "dị mkpa" na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, ekenyela ọrụ a 100 ndị ntorobịa ọjọọ. Mgbe nrịgo siri ike, ndị na -eto eto na -ahụ onwe ha n'ime anụ ọhịa mana ọ mara mma nke ukwuu, ebe mgbakwunye na ime mgbanwe, ha ga -amụrịrị ibikọ ọnụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịlanarị.
100 (100 1) nke XNUMX
Ndị Ickabog (2020)
Mgbe enweghị afọ 13 n'ụdị nke akwụkwọ akụkọ efu - emesịa ebipụta ya Harry Potter na Onye Na-egbu Ọnwụ na 2007-, JK Rowling ji akụkọ ọhụrụ lọta. N'ime egwuregwu a, onye ode akwụkwọ nrite mmeri na-akpọrọ ndị na-agụ ya gaa na ala Cornucopia na ebe ahụ ọ na -adọpụta nkata nke metụtara "eziokwu na iji ike eme ihe" - dị ka Rowling n'onwe ya si kwuo.
Onye edemede JK Rowling.
Ihe niile bara ụba na obi ụtọ n'alaeze Cornucopia. Onye ndu ya bụ ezigbo eze na mmadụ niile hụrụ ya n'anya na ndị bi na ya kwụpụrụ iche maka nnukwu aka ha; ha mere ọ delụ nke jupụtara n'ọ joyụ nye ndị obodo na ndị ọbịa.
Otú ọ dị,, N'ebe dị anya, na apịtị apịtị n'ebe ugwu nke alaeze ahụ, ọnọdụ dị iche. Dị ka akụkọ mgbe ochie si atụ ụmụaka, ogologo anụ ogologo aha ya bụ Ickabog jupụtara oghere ndị ahụ dị njọ. Ugbu a, nkata ahụ na -agagharị na -atụghị anya ya mgbe ihe ekwesịrị ịbụ akụkọ ifo malitere imezu ...
Oku oku (2020)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ikpeazụ nke onye dere ya Arturo Pérez Reverte. Ọ na -asọpụrụ ndị niile lụrụ ọgụ wee nye ndụ ha na agha obodo Spanish. Onye ode akwụkwọ ahụ rụrụ ọmarịcha ọrụ nke na -egosi etu o siri jisie ike jikọta akụkọ ifo na akwụkwọ nke ọma. mere n'oge ahụ dị egwu. Ọ bụghị n'efu ka ọrụ ahụ nwetara ihe nrite ndị nkatọ n'otu afọ ahụ ebipụtara ya.
Ọ na -amalite n'abalị nke Ọnwa Iri na Abụọ 24, 1938 mgbe ọtụtụ puku ndị agha zọrọ ụkwụ ka ha guzo na Castellets nke Segre. Ndị nwoke na ndị nwanyị bụ ndị otu XI Mixed Bridada nke ndị agha nke Republic. N'echi ya malitere otu n'ime ọgụ ọgụ kacha ịwụfu ọbara na ala Spanish: agha nke ndị Ebro.
Oku oku ...
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ mpụ nke Fernando Gamboa onye Spain dere. Nkata ahụ na -agwakọta ezigbo ihe na nsonaazụ ya na ọdịnihu akụkọ ifo na 2028. Edebere akụkọ a na Barcelona wee malite na Ọgọst 17, 2017, mgbe mwakpo ndị na -eyi ọha egwu mere na Las Ramblas - Eziokwu nke gburu ihe karịrị mmadụ 15 na ọtụtụ ndị merụrụ ahụ.
Otu ehihie n'ọnwa Ọgọst otu ụgbọ ala zigara otu ndị mmadụ na Las Ramblas na Barcelona. Mita ole na ole site enwere nwa agbọghọ Nuria Badal, WHO, n'etiti mkpu na mgbagwoju anya, ọ ghọtara na ya nwere ike zere ihe niile mere. Emeghị mkpebi ziri ezi n'oge, kwụsịrị na nnukwu nsonaazụ ga -agbanwe ndụ ya na ọdịnihu obodo.
Afọ iri na otu ka e mesịrị Nuria abụrụla onye uwe ojii nke Barcelona mebiri emebi. Omume nrụrụ aka, mbata na ọpụpụ, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na -eyi egwu na iyi ọha egwu agbanweela obodo. Mgbe ọ gafesịrị ọnọdụ dị egwu, ndụ nwa agbọghọ ahụ ga -agbanwerịrị enweghị atụ. Site ebe ahụ ọ ga -echerịrị ọtụtụ ụzọ gafere ịzọpụta ndụ ya na mba ya niile.
Mgbapụta: Akwụkwọ akụkọ ...
Ọ bụ thriller nke edere na spanish Juan Gómez-Jurado. Site na akwụkwọ akụkọ a, onye ode akwụkwọ malitere trilogy banyere ihe omume Antonia Scott. Edebere atụmatụ ahụ na Madrid ọ na -egosipụtakwa nwanyị nwere nghọta nke doziri mpụ dị mkpa na -enweghị onye uwe ojii.
Antonia scott Ọ bụ onye gbara ọsọ ndụ n'ụlọ ya na Lavapiés mgbe ihe omume ezinụlọ mere ka ọ bụrụ onye na -eri anụ. Onye nyocha ahụ rutere ebe ahụ Jon Gutierrez; ebumnuche ya bụ ka onye nnọchi anya ya nabata ikpe ọhụrụ na Madrid. Mgbe mkparịta ụka ma nweta nkwado, ha abụọ Ha na -abanye nyocha jupụtara n'ihe nzuzo, ndị ọ metụtara bara ọgaranya na oke ihe omimi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Akwụkwọ akwadoro maka ọdịda
Insomnia, nke Daniel Martín Serrano dere. Nyochaa
Helena Tur. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Ọbara Ọjọọ